कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं हामी ? - दुर्गा खनाल - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं हामी ? – दुर्गा खनाल
कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं हामी ? – दुर्गा खनाल
नहिडे पनि अपजस आउनेछ,
हिडे पनि आउनेछ
काम गरे पनि आउनेछ
नगरे पनि आउनेछ,
त्यसो भए वास्ता किन गर्नु ?
होच्याउने समाज छ
काम पूजा हो, त्यो त मुखमा मात्र छ
गफाडी समाजको विकास भएको छ।
धर्मको डोरि, जातको भुमरीमा किन पारेको?
सामाजिक बन्धनले किन बाँधेको?
ऊ पनि प्रकृति नै हो
परिवर्तन कर्मले हुन्छ,
गफाडी समाजमा जन्मिए
बच्चाले नि गफमात्र सिक्नेछ ।
विकास कर्मले निम्त्याउने सम्भावना हो।
तपाईंसंग पनि सकारत्मक सोंच फैलाउने किसिमका लेख रचनाहरु छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ ।
Previousमानसिक रुपमा बलियो बन्नको लागि अपनाउनुहोस् यस्ता बानीहरु
Nextअल्बर्ट क्यामुका जीवनोपयोगी भनाइहरु